နွေရာသီက လူကာကူ အစား ယူနိုက်တက်တို့ ရောင်းချသင့်တဲ့ ကစားသမားကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂျာမိန်းဂျီးနက် - SPORTS MYANMAR
နွေရာသီက လူကာကူ အစား ယူနိုက်တက်တို့ ရောင်းချသင့်တဲ့ ကစားသမားကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂျာမိန်းဂျီးနက်
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဖြစ်သူ ဂျာမိန်း ဂျီးနက်က မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့ ကာလ တုန်းက ရိုမီလူ လူကာကူ ထက်စာရင် ဘာကြောင့် အန်သိုနီ မာရှယ်ကို ရောင်းချ ခဲ့သင့်ကြောင်းကို ရှင်းပြ သွားခဲ့ ပါတယ်။
လူကာကူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က အဲဗာတန်မှာ ယူနိုက်တက် ကို ပေါင် ရ၅ သန်းနဲ့ ပြောင်းလာ ခဲ့ပြီးနောက် မန်ချက်စတာ ကလပ် အတွက် ပွဲပေါင်း ၉၆ ပွဲမှာ စုစုပေါင်း သွင်းဂိုး ၄၂ ဂိုး ရယူ ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ဘယ်ဂျီယံ လက်ရွေးစင်ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ဂိုးသွင်းခြေ အတည်ငြိမ်ဆုံး ကစားသမား ဖြစ်နေ ခဲ့ပေမယ့်လည်း အိုလီဂန်နာ ဆိုးရှား ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လက လူကာကူ ရဲ့ ထွက်ခွာမှု ကို ခွင့်ပြု ပေးခဲ့ ပါတယ်။
လူကာကူဟာ အင်တာမီလန် အသင်းကို ပြောင်းရွေ့ သွားခဲ့ပြီးနောက် စီးရီးအေ မှာ ပုံစံကောင်း ပြသလျက် ရှိနေတဲ့ အပြင် နိုင်ငံ အသင်းမှာလည်း ဂိုးတွေ တောက်လျှောက် သွင်းယူ နေပါတယ်။ အသက် ၂၃ နှစ် အရွယ် မာရှယ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က မိုနာကို မှ မန်ယူနိုက်တက် ကို ပြောင်းလာ ခဲ့စဉ်က သမိုင်း တစ်လျှောက် စျေးအကြီးဆုံး ဆယ်ကျော်သက် ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မာရှယ်ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကစားသမား ဘဝ မျှော်လင့် ထားသလောက် စွမ်းဆောင် ထားခဲ့ခြင်း မရှိ ခဲ့ပါဘူး။
ဂျီးနက်က “မာရှယ် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကို ရောက်လာ ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း သူဟာ အဆိုပါ ရာသီ ရဲ့ တစ်လခွဲ နှစ်လလောက် ပုံစံကောင်းကို ပြသ ခဲ့ပြီး အဲဒီနောက် သူဟာ လုံးဝကို ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့ တယ််လို့ ကျွန်တော် ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သနားစရာ ကောင်းတဲ့ ရပ်ဖို့ဒ် ကတော့ အစွမ်းကုန် အားထုတ် ကစား နေပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူ စိတ်ပျက် နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး သိထား ကြတဲ့ အတိုင်းပဲ သူဟာ ဂိုးသွင်းစက် မဟုတ်သလို ဂိုးသွင်း ပါရမီ ပါလာသူလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
သူ့မှာ အခြား အရည်အသွေး ကောင်းတွေတော့ ရှိနေပြီး ဒါတွေဟာ အရမ်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလန် မှာတော့ ပုံမှန် မြင်တွေ့ နေရပါတယ်။ သူဟာ ဝေဖန်မှုတွေ အားလုံး စုပြုံ ခံနေရပြီး ယူနို်က်တက်မှာ မာရှယ်လို လုံးဝ ပျောက်နေတဲ့ ကစားသမား တွေလည်း ရှိနေ ပါတယ်။ ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေ ရှိနေတာ အမှန် ပေမယ့် ဒါတွေဟာ ရာသီတိုင်း ယူနိုက်တက် မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အရာပါ။
အပတ်တိုင်း ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ မာရှယ်လို ကစားသမားမျိုး အသင်းမှာ ရှိနေချိန်မှာ ဘာကြောင့် လူကာကူ ကို ဖယ်ရှား ပစ်ခဲ့တာလဲ ? သူဟာ အသက် ငယ်ရွယ်တဲ့ ကစားသမား ဒါမှမဟုတ် သူဟာ ပိုမို တန်ဖိုး ရှိနေလို့လား ? ကျွန်တော် ကတော့ သူတို့ ချမှတ် ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အပေါ် မေးခွန်း ထုတ်သွား ချင်ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ဟာ ယနေ့ည မှာတော့ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ၈ ပွဲ ကစားထား ရမှာ ပွဲတိုင်း အနိုင် ရရှိ ထားခဲ့တဲ့ မဟာပြိုင်ဘက် လီဗာပူး အသင်းကို အိမ်ကွင်း အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ လက်ခံ ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားရမှာ ဖြစ်ပြီး ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ အသင်းဟာ ချန်ပီယံ မန်စီးတီး နဲ့ ရမှတ် ကွာဟမှုကို ဒီအတိုင်း ဆက်ထိန်းထားဖို့ ရည်မှန်း နေတဲ့ အပြင် ဖိအားတွေ များနေတဲ့ ဆိုးရှား ရဲ့ ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ ကလည်း တန်းဆင်းဇုန် နဲ့ တစ်မှတ်သာ ကွာဟ နေတာကြောင့် ဒီပွဲမှာ ရလဒ်ကောင်း ရယူဖို့ တာဆူ နေပါတယ်။